Home Wararka Gudaha Dagaal Khasaaro Badan Dhaliyay Oo Ka Dhacay Gobolka Hiiraan
Warar dheeraad ah ayaa lag helayaa dagaal khasaaro badan dhaliyay oo Gobolka Hiiran ku dhex-maray Ciidanka la magac baxay macawisleyda ee ka dagaalama Gobolkaasi iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Dagaalka oo ahaa mid aad u xooggana yaa ka dhacay deegaanka Bacda ee hoostaga degmada Matabaan ee Waqooyinka Gobolka Hiiraan, waxaana lasoo sheegayaa in xaaladda degaanku ay deggan tahay sidoo kalena uu istaagay dagaalku.
Kooxda macamisleyda oo inta badan dagaallo xooggan la gala Al-Shabaab ayaa ka hadlay dagaalkaasi ka dhacay deegaanka Bacda ee hoostaga degmada Matabaan ee Waqooyinka Gobolka Hiiraan, waxaana Saraakiil u hadashay ay carrabka ku dhufteen in dagaalkaasi ay guulo waa weyn ka gaareen waa sida ay hadalka u dhigeene.
Saraakiisha Macawiisleeyda ayaa soo bandhigay Hub aay sheegeen in AL-Shabaab ka qabsadeen, waxaana sidoo kale ay intaa kud areen in gabi ahaanba goobihii lagu dagaalamay ay la wareegeen.
Sargaal lagu magacaabo Xasan Faarax oo hoggaaminayay weerarkii xalay lagu qaaday fariisin ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Bacda ayaa sheegay in ay dagaalkaasi ku furteen hub kala duwan oo ay ku jiraan Qoraha fudfudud.
Si kastaba lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkakasi, waxaana dadka degaanka ay soo sheegayaan in dagaalku ahaa mid Culus, maaddama sida ay sheegeen ay maqlayeen dhawaqa rasaasta culus oo labada dhinac ay isku adeegsanayeen.
Marka laga taho sheegashada Guulaha ee macawisleyda, ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dhanka dagaalamayaasha AL-Shabaab oo ay kaga hadlayaan dagaalkaasi.
Previous articleMadaxweynaha Ukraine: “Askarta Ruushka uga dhimatay dagaalka socda waxa ay ka badan yihiin 40,000
Next article(Cumar Filish) ayaa si rasmi ah u daahfuray qaadista Imtixaanaadka shahaadiga ah ee Fasalka 8-aad
Xisbiga Nabad iyo Nolol oo diyaarinaayo qorshayaal hallis ku ah Hassan...